स्थानीय तहसँग गौतमबुद्ध सन्देश -
मायादेवी च्यारिटेबल फाउण्डेशनद्वारा न्यानो कपडा वितरण
प्रतिनिधिसभा तुरुन्त पुनःस्थापना हुनुपर्छ : घनश्याम भुसाल
‘मिडियाले वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ’
उच्च शिक्षाको चुनौतीबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सुरु
गुल्मीमा ७२ वर्षको उमेरमा सम्बन्ध विच्छेद
मुख्य समाचार विचार/अन्तरवार्ता
स्थानीय तहसँग गौतमबुद्ध सन्देश
October 2, 2020 October 2, 2020 gautam buddha sandesh	0 Comments
लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिबिहीन रहेको स्थानीय तहले २०७४ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपश्चात जनप्रतिनिधि पाएको छ । मुलुकमा अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । तीमध्ये जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा मानिने स्थानीय सरकार (तह) हो । जनताको पीरमर्का तथा समस्या नजिकबाट बुझेर त्यसको समाधान गर्न अगाडी बढ्ने सरकारको रुपमा स्थानीय तहलाई बुझ्ने गरिन्छ । स्थानीय तहमा नागरिकले जनप्रतिनिधिहरूले नीति, कार्यक्रम लगायत विकास, निर्माण र कार्यशैली जस्ता पक्षहरूमा कत्तिको सिर्जनशील भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने विषय नजिकबाट चासो र चिन्ताका साथ हेरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि गरेका कार्यहरु, कोभिड–१९ ले पारेका प्रभाव र यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भएका प्रयास र कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा भएका कठिनाइहरुबारे हामीले विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ रिब्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पाका अध्यक्ष नारायण बहादुर जिसी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमचन्द्र अर्यालसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अशं ः
जिम्मेवारी अनुसार नै काम गरिरहेका छौं
रिब्दीकोट गाउँपालिका, पाल्पा
रिब्दीकोट गाउँपालिकाले लकडाउनको सुरुको अवस्थामै महामारी मात्रै नभएर अन्य समस्याहरुलाई पनि आफ्नै जिम्मेवारी ठानेर सम्बोधन गरेका थियौ । गाउँपालिकावासीकै हितको लागि जिम्मेवारी अनुसार नै हामीले काम गरिरहेका छौं । सुरुमा बुझाइ केही फरक भए तापनि अहिले आएर बुझ्दा महामारी होस् वा अरु नै कुनै समस्याको समाधान एकआपसमा मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा पुगेका छौं । जब महामारी फैलिरहेको अवस्था थियो त्यतिबेला सबैले अरुले नै समस्या समाधान गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने बुझाइ धेरैको रहेको थियो । स्थानीय सरकारमा बसेकाले प्रदेश सरकारले काम गरिदियोस् भन्ने आशा गर्ने तथा प्रदेश सरकारमा बसेकाहरुले संघीय सरकारले गरोस् भन्ने आशा गर्ने । त्यस्तै गाउँमा पनि अर्काे गाउँकोले काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच थियो । यो समस्यालाई बुझेर हामी अगाडी बढेका थियौ । हामीले सुरुदेखि नै जिल्लाका बैठकहरुमा जान थाल्यौ । जसबाट हरेक ठाउँको समस्या आ–आफै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने जान्न पायौ । त्यसैले सुरुवातमै पालिकामा भएका सबै विद्यालयहरुलाई क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग गर्न सुरु गरेका थियौ । जसले गर्दा व्यवस्थापनमा ढिलाई भए तापनि संक्रमितहरु क्वारेन्टाइनमा बसेकाले समुदायस्तरमा संक्रमण फैलन पाएन । सीमित व्यक्तिमा मात्र भाइरस संक्रमण भयो । स्थानीयको मनोबल बलियो भएकोले पनि भाइरसले महामारीको रुप लिन सकेन । स्थानीय सरकारले जसरी माथिल्लो सरकारको आशा राखेका थियौ त्यसै गरिकन जनताले पनि स्थानीय सरकारको आशा राखेका थिए । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको महामारी विकसित मुलुक हुँदै हाम्रो स्थानीय तहहरुसम्म आइसकेको छ । यसको रोमथामका लागि एक्लै सम्भव नभएकोले व्यक्तिव्यक्ति, शिक्षक, कर्मचारी तथा उद्यमी र व्यवसायीहरुसंग सहकार्य गरेर विपद् व्यवस्थापन कोषको निर्माण ग¥यौँ । जसमा ५३ जना व्यक्ति, संस्था तथा उद्योगीहरुबाट करिब १ करोड रकम विपद् कोषमा जम्मा भयो । प्रदेश सरकारबाट १० लाख र संघीय सरकारबाट ६ लाख प्राप्त भएको थियो । विपद् कोषमा जम्मा गरिसकेपछि हामीले राहत वितरणको कार्यलाई अगाडी बढायौँ । सुरुका दिनहरुमा राहत वितरण फेसन जस्तो पनि भयो । राहत नपाए आजको भोलि नै मरिन्छ की जस्तै सोच गाउँपालिकावासीमा आउन थालेको पाइयो । दोस्रो चरणको राहतपछि राहतले केही नहुँदो रहेछ भन्ने सबैले बुझ्न थाले र राहत वितरणको काम त्यहीं नै रोकियो । लकडाउनपछि बाहिरबाट गाउँ फर्किनेहरुको लागि आउनेजाने भाडाको व्यवस्था गरेर सँगै खानाको लागि दिनको ४ सयका दरले पैसाको व्यवस्था गरी विद्यालयमा बसालेका थियौ जसमा २३ लाख जति खर्च भएको थियो । यससँगै विद्यालयमा विद्युत, पानी लगायत स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सामाग्रीहरु जुटाउँदै सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरुलाई पीपीई समेत प्रदान गरेका थियौ । जिल्लाको अनुगमन टोलीले अन्य गाउँपालिकाको तुलनामा हाम्रो गाउँपालिकामा व्यवस्थापन राम्रो भएको बताएका थिए । भाइरसले गर्दा गाउँका मान्छेहरुमा त्रास बढ्दै गइरहेको थियो । बाहिर जानु हुँदैन कतै गयो भने भाइरस सर्छ भन्ने त्रास धेरै थियो । सो त्रासलाई हटाउन समिति बनाइए हामी आफैले दूरी कायम गरी बोल्दा या भेट हुँदा भाइरसले आक्रमण नगर्ने भनी बुझाउन थाल्यौं । गाउँमा दक्ष डाक्टरहरु नभएको र एच ए तथा सामान्य नर्सले उपचार गर्ने भएकोले उत्कृष्ट सेवा दिन नसकेता पनि जे छ त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले काम गरेका थियौ । हात धुने विधि, मास्क प्रयोग गर्ने तरिका तथा आयूर्वेद र अन्य औषधीहरुको सेवनको लागि हरेक वडाहरुमा स्वयंसेवक परिचालन गराएका थियौं । जसले गर्दा स्थानीयको मनोबल बढाउने काम भयो । जसको कारण कम संक्रमित भएको गाउँपालिकाको रुपमा देखाउन पायौं । अझै पनि धेरै पालिकाहरुमा कार्यालयहरु तथा व्यवसायहरु बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ तर हामीले यस्तै केही गर्नु परेन । भेटिएका संक्रमितहरुलाई पनि घरमै राखेर सर्वदलीय समिति तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली घरमै पुगेर उपचारमा खटिएका थियौं । जसमा सर्वदलीय समितिको निर्णय अनुसार काम भइरहेको थियो । लकडाउनको समयमा गाउँपालिकाबाट १० लाख रुपैयाँ छुट्याएर नालाहरु निर्माण गर्ने, सरसफाई गर्ने लगायतका काममा रोजगारी दिएर खर्च गरियो । अहिलेसम्म ४५ लाख रुपैयाँले खर्च धानेको अवस्था छ । जुन खर्च सार्वजनिक गरिएको छ र अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सहयोग गरेका सहयोगदाताहरुलाई सम्मान गर्ने योजना पनि हामीले बनाएका छाँै । जत्तिसुकै अप्ठेरो परिस्थिति भए पनि हामीले विकासका कामहरुलाई रोकेका छैनौं । विकासका योजना, भेला तथा मेसिनरी औजारका कामहरुलाई पनि हामीले बन्द गर्नु परेन । भेला तथा गोष्ठीहरुलाई स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर २५ जना भन्दा कम जम्मा भइ सम्पन्न गरेका छौं । विकास तथा पूर्वाधारको् केही काम बन्द भयो । जसको ५० लाखमध्ये ४५ लाख फिर्ता गरेर कोभिड कोषमा जम्मा गरेका छौं । बाँकी रहेका अरु सबै कार्यहरु सूचारु नै छन् । व्यवसाय गर्न गाह्रो छ फेरी पनि सबैभन्दा कम स्रोत भएको गाउँपालिकामध्येमा हाम्रो गाउँपालिका पनि पर्ने गर्छ । आफ्नै स्रोत जम्मा ३५ लाखसम्म पुग्ने गरेको छ । अन्य खर्च संघीय सरकारको आधारमा गर्ने गरेका छौँ । कृषिमा आधुनिक औजारका सामाग्री, सिँचाई तथा वातावरणका कुरा सबैतर्फ सन्तुलित तरिकाले काम गरिरहेका छौँ ।
सबै ठाउँमा सर्वदलीय रुपमा राजनैतिक दल तथा अन्यको सुझावमा काम गरिरहेका छौ । जसले गर्दा त्यति धेरै गुनासो आएको छैन । हामीलाई कस्तो लाग्छ भने कसैको काम कसैलाई पन्छाउँदैमा समाधान नहुने हुँदा सबैको सहमतिको आधारमा काम अगाडी बढाइरहेका छौँ । भाइरसको सन्दर्भमा शक्तिशाली राज्यहरुले पनि यसको औषधीको टुंगो अझै नलगाइसकेकाले हामीले यसमा केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले आफ्नो मनोबल र व्यवस्थापनलाई ठिक गर्दै गयौँ भने सबै कुरा विस्तारै ठिक हँुदै जानेछ भन्ने कुरामा विश्वास राखेका छौँ । अहिलेसम्म पालिकामा दुई जना जनप्रतिनिधिले मात्र पीसीआर परिक्षण गरेका छौँ । अन्य कसैले पनि परीक्षण गराएका छैनौ । संक्रमण भइहाले पनि निको भइरहेको देख्न पनि सकिन्छ । त्यसैले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन् ।
मापदण्ड अनुसार विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडी बढाएका छौं
रिब्दिकोट गाउँपालिकामा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या पाल्पा जिल्लामै न्यून रहेको छ । संक्रमितको संख्या त्यति बढी छैन । कोभिड–१९ को संक्रमणको सन्दर्भमा आफ्नो धारणा राख्दा कोभिडमा विकसित राष्ट्रहरु अमेरिका बेलायत तथा नेपालमै पनि काठमाण्डौ, बुटवल जस्ता शहरहरुमा व्याख्या गरे जस्तो रणनीति भन्दा पहाडी इलाकाका गाउँहरुमा रणनीतिहरु फरक हुनुपर्छ । किनकी गाउँहरुमा घरहरु छरिएर रहने र बस्ती बाक्लो नहुने हँुदा यसै अनुसारको रणनीति तयार गरिनुपर्छ । यसैले पहाडी इलाकाका पालिकाहरुले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर रणनीतिहरु तयार गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ । साथै स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दे गाउँपालिकाले आफ्ना विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडी बढाउनुपर्छ । भदौ महिनाको १४ गतेदेखि रिब्दिकोट गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा आएको छु । सोही दिनदेखि नै हामीले उपभोक्ता समिति गठन गर्ने अन्य विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अगाडी बढाउने कामहरु गरिरहेका छौ । कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्यकर्मीहरु खटिनुभएको छ । जनचेतना फैलाउने, संक्रमित व्यक्तिहरुलाई आइसोलेसनमा राख्ने तथा बाहिरबाट आएकालाई होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने काम गरिरहेका छौ । कोभिड संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दे पालिकामा भिडभाड नगर्ने र मापदण्ड अनुसार मात्रै काम गर्ने गरी विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडी बढाइरहेका छौ ।
← रुपन्देही र कपिलवस्तुमा दुई जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु
स्थानीय तहसँग गौतमबुद्ध सन्देश →
स्याउको कार्टुनमा राखेर लागूऔषध कारोबार
December 17, 2018 gautam buddha sandesh	0
नेटवर्किङ मार्फत ठगी गर्ने प्रहरी नियन्त्रणमा
January 25, 2018 gautam buddha sandesh	0
रेसुङ्गा नगरपालिकाको वित्तीय प्रगति
February 21, 2019 gautam buddha sandesh	0
October 2, 2020 gautam buddha sandesh	0
असोज १६, काठमाण्डाै । साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा दोस्रो जित निकालेको छ । आबुधाबीमा राति
रुपन्देही कञ्चन ४ मा रहेको बुद्ध नगर सामुदायिक टाेलको खेल मैदान स्तरोन्नती हुँदै
August 19, 2020 gautam buddha sandesh	0
ओलम्पिक कमिटीको कार्यालय अझै एक साता बन्द हुने
August 15, 2020 gautam buddha sandesh	0
युगान्डाका धावक जोसुवाले बनाए विश्व कीर्तिमान
November 20, 2020 November 20, 2020 gautam buddha sandesh	0
५ मंसिर, काठमाडौं । युगान्डाका राष्ट्रपति पदका उम्मेदबार बोबी वाइनलाई पक्राउ गरेपछि राजधानी कम्पालामा हिंसा भड्किएको छ । दुई दिनको
July 16, 2019 gautam buddha sandesh	0
July 1, 2019 gautam buddha sandesh	0
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक पर्यटन समाचार
गौतमबुद्ध विमानस्थल : म्याद थपिए पनि लागत नबढ्ने
June 19, 2019 gautam buddha sandesh	2
मायांले भरिएको मन जलायौ भने?
September 29, 2020 gautam buddha sandesh	0
मणि भुसाल उस्ले बारबार भन्ने गर्थि तिम्रा हजारौं साथिहरु छन आफ्नाहरु छन। अनि जति छन सबै सबै नजिकका छन। धेरै
म माया गर्छु तिमिलाई
June 7, 2020 gautam buddha sandesh	0
हिड्छ छिमेकीको पछि पछि !
May 30, 2020 gautam buddha sandesh	0
मुख्य समाचार विचार/अन्तरवार्ता साहित्य/मनोरन्जन
मुन्ना जी !
May 10, 2020 gautam buddha sandesh	0
September 14, 2019 gautam buddha sandesh	0
असोज १६, काठमाण्डाै। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफैँ मिटर रिडिङ गरी अग्रिम महसुल भुक्तानी गरेर २५ प्रतिशतसम्म छुट लिन आग्रह गरेको
प्रविधि बिबिध समाचार
क्लासिक टेकको इन्ट्रानेट सेवा पश्चिमको बझाङ्ग, बाजुरादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङ्गसम्म उपलब्ध
September 11, 2020 gautam buddha sandesh	0
इन्टरनेटको विकासको संक्षिप्त जानकारी
November 28, 2019 December 2, 2019 gautam buddha sandesh	0
ग्रिन फाउण्डेशन अफ नेपालको शुभारम्भ
November 22, 2019 gautam buddha sandesh	0
कार्यकारी प्रमुख : गुनाराम घिमिरे
व्यवस्थापक : बिष्णु भट्टराई
मोबाईल : ९८५७०३३८७१